Ban ki Moon oo xiligiisii dhamaaday & qofkii noqon lahaa Xoghayaha xiga ee QM oo la shaaciyey +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ban ki Moon oo xiligiisii dhamaaday & qofkii noqon lahaa Xoghayaha xiga ee QM oo la shaaciyey +Sawirro
Ra’isul Wasaarihii hore ee dowlada Bortaqiiska Antonio Guterres ayaa lagu wadaa inuu noqdo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ka dib markii uu xiliga ka dhamaaday Ban Ki Moon.
Antonio Guterres waxaa lagu wada in si rasmi ah xilkaasi loogu doorto maalmaha soo socda, iyadoo codeyn dhacday maanta oo Arbaca aheyd ay 13 ka mid ah 15ka xubnood ee joogtada ka ah Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ay ogolaadeen musharaxnimada Guterres.
Labo xubnood ayaa ka aamusay, Mana jirin cid diiday, iyadoo codeyntan oo aheyd mid aan rasmi aheyn ayaa muhim u laheyd doorashada Xoghayaha Guud.
Beri oo Khamiis ayaa la filayaa inay Golaha amaanku ay si rasmi ah ugu codeyaan, ka dibna ay soo saaraan qaraar ku aadan go’aankooda, kaasoo ay u diri doonaan Golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay oo ugu dambeyn si rasmi ah u sharciyeyn doona xilka Guterres.
Waxa uu xilkan kala wareegi doonaa Ban ki Moon bisha Janaayo ee sanadka 2017ka.
Guterres, oo 67 jir ah ayaa soo noqday Ra’isul Wasaarihii Portugal intii u dhaxeysay 1992dii iyo 2002dii, isagoo madax ka soo noqday Hey’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay muddo 10 sanadood ah 2005 illaa 2015kii.